Inkqubo yemveliso yeebhotile zeglasi ibandakanya:
① Ukulungiswa kwangaphambili kwento ngaphambi kokuba kusetyenzwe. Zikhuhle izinto ezingafunekiyo (i-quartz isanti, umlotha wesoda, i-limestone, ifeldspar, njalo njalo) ukomisa izinto ezingamanzi, kwaye ususe nezinto ezingafunekiyo zensimbi ukuqinisekisa umgangatho weglasi.
② Ukulungiswa kwezixhobo zebatch.
③ Ukunyibilika. Izinto zeglasi yeebhetshi zifudunyezwa kubushushu obuphezulu (i-1550 ~ 1600 degrees) echibini leedike okanye ebanjelweni ukuze ibe yindawo efanayo, engekho bubble, kunye neglasi engamanzi ehlangabezana neemfuno zokubumba.
④Ukulungiselela. Beka iglasi engamanzi kulombumba ukuze wenze iimveliso zeglasi zokwenza imo efunekayo, ezinje ngeplates kunye nezinto ezahlukeneyo.
⑤ Unyango lobushushu. Ngokumisela, ukucima kunye nezinye iinkqubo, uxinzelelo, ukwahlula isigaba okanye ikristali ngaphakathi kweglasi kuyasuswa okanye kuveliswe, kwaye imeko yesimo seglasi iyatshintshwa.
二 Umahluko phakathi kweglasi enomsindo kunye neglasi engamelana nobushushu
1. Ukusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo
Iglasi enomsindo isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo, umhombiso, umzi mveliso wokuhambisa iimoto (iingcango, iifestile, udonga olujikelezayo, umhombiso wangaphakathi, njl.njl.), Umzi mveliso wefanitshala (ifanitshala yefanitshala, njl. Njl.) ii-conditioners, iifriji kunye nezinye iimveliso).
Iglasi yokulwa nobushushu isetyenziswa ikakhulu kushishino lweemfuno zemihla ngemihla (izikhongozeli zeglasi ezinganyisi ubushushu, i-tableware enganyangekiyo ubushushu, njl njl), kunye nomzi-mveliso wezonyango (osetyenziswa kakhulu kwii-ampoules zonyango kunye nabenzi beemvavanyo).
2. Iziphumo ezahlukeneyo zobushushu
Iglasi enokumelana nobushushu luhlobo lweglasi enamandla okuxhathisa okomlilo otshisayo (iyakwazi ukumelana nokupholisa ngokukhawuleza kunye notshintsho lweqondo lobushushu kunye nokuqiniswa okuncinci kokunyuka kwamafutha), kwaye isebenzise ubushushu obuphezulu (ubushushu obuphezulu kunye nobushushu bokuthambisa), ngoko ke ehovini nakwi-oven microwave , Nokuba amaqondo obushushu ngequbuliso Angasebenza kwakhona ngokukhuselekileyo xa atshintshiwe.
Utshintsho lwexeshana kwiglasi evuthayo kwi-oveni ye-microwave kunokubangela ukuqhekeka. Kwinkqubo yokwenza iglasi evuthayo, ngenxa ye "nickel sulfide" ngaphakathi, iglasi iya kwanda kunye nexesha kunye namaqondo obushushu atshintshile, kwaye kukho ithuba lokuziqhuma. Akunakusetyenziswa konke konke.
3. Iindlela ezahlukeneyo zokutyhoboza
Xa iglasi echasene nobushushu yaphukile, iya kuqhekeka kwaye ingasasazeki. Iglasi enganyamezeleki ubushushu ayinabungozi bokuziqhekeza ngenxa ye-nickel sulfide, kuba iglasi enganyamezelekiyo ubushushu ngokuthe ngcembe iyabanda, kwaye akukho mandla okuxolelwa ngaphakathi kwiglasi, ngoko ke eyaphukileyo Ayizukubhabhuka yodwa.
Xa iglasi enomoya ovuthuzayo yaphulwe, iya kuqhaqha kwaye ibhabhe. Ngexesha lenkqubo yokuhendwa, iglasi enamanzi enza i-prestress kunye namandla e-condensation, ke xa yonakalisiwe okanye iqhume, amandla ayo ancitshisiweyo ayakhutshwa, enze iziqwenga ezisasazeke, kwaye kwangaxeshanye kuqhume.
Ixesha lokuposa: Aprili-29-2020